Maxaa Nagala Gudboon Xaaladda Cusub ee Karoonaha (Covid19)? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ilhaan Ciise Maxamed — April 9, 2020
Cudurka karoonaha waa jeermis kadhasha Fayruska karoona, haddii aad maqasho Fayrus waa in ey kugu soo dag dagtaa cudurkaas intiisa badan in uunan daawo lahay, cudurada Fayruska dhaliyana waxa ugu caansan HIV-ga oo intabadan bulshadu u taqaan cudur in uu yahay cudur dilaa ah.
Tallaabooyinka Nala Gudboon:
1.Ka hortagga: waxaa waajib nagu ah in aan nafteenna, qoyskeenna iyo qarankeennaba ilaalinno. Haddii uu cudurka ku’asiibo isku day in aadan dadka kale gaarsiin.
2.Latacaalidda: haddii aan isku ogaanno calaamadaha cudruka ama qof qoyskaaga kamid ah ha’ula dag dagin cisbitaalada bulshada, fadlan mas’uul haka noqon dhibaateynta bulshadaada. Waxaa nala habboon in sitoos ah ula xiriirno lanbarka gurmadka deg-degga ah ee 449.
3.Karantiimeyn: in aad isku karantiisho adiga oo diidaya in aad dadka kale dhibaateyso waa awood, waa dadnimo waa caaqilnimo, marwaliba waxaa noo habboon in aan qabanno waxa aan awoodno-marki aad xanuunsato waxa kali ah ee aad awooddo waa in aadan adigu Qatar sii abuurin, Is karantiiliddu ceeb maahan ee waa caawin.
4.haka daalin in aad wacyigaliso dadka kugu xeeran: waxaan ubbaahannahay wacyigalin xoog leh si’aan u helno wacyigalintaasi waa in aan helnaa dad badan oo isxilqaama una adeega naftooda iyo dadkoodaba.
Aanku Xisaabtanno Waxa Aan Heysanno
Dagaalkii koowaad ee adduunka majirin wax cusbitaallo badan ah, sidookale dadka iyo askartaba waxa ey udhimanayeen dhaawacyadii soogaaray, waxaakale oo aad uyaraa shaqaaliha caafimaadka. Taasi waxa ey dhalisay in florence nightingale oo ah gabadhii billowday kal-kaalisanimada, in dadka dhaawaca ah ey isugu geysay halmeel si ey shaqaalaha u kala gaaraan dadka. Waxaana yaraaday qatarta dhimashada taas baddalkeedana waxaa billowday fursadda bogsashada.
Maantay waxa an ubbaahannahay in aan ku xisaabtanno waxa aan heysanno, qof waliba oo naga mid ah waxaa u joogo dad da’ah u jecel yahay, waxaana maqleynaa in dadka da’da ah ey aad unugul yihiin.
Waxa aan Heysannaa:
1.qof waliba oo aqoon caafimaad leh maantay waa muhiim waxaana saaran mas’uuliyad, ugu yaraan aan ku fakarno in aan wax u qaban karno xaafadda aan dagannahay. Qoyskaaga iyo naftaada xitaa haddii aad wax u qabato waa nolol!
2.qalabkaan soo dhawyso: kaloofis ama gacmo gashi, waji xirka caafimaadka, banbeeyaha neefta (Ambu bag) iyo jeermis dilayaasha waa qalabka kahortagga asaasiga ah loo isticmaalo.
3.albaabka aan ku dhajinno tuubbada biyaha, si qof waliba oo bannaanka kayimaado ey ugu fududaato in uu gacmaha isaga meyro asaga oon cidna laxiriirin.
4.kasii fakar sidi aan u karantiimeyn lahayn iyo meesha aan ku karantiimeyn lahayn haddii qofkeen laga helo, Alle nooma kaso e.
5.sii qaado tababar online ah (Youtube-ka), si’aad wax badan uga ogaato qaababka loo karantiimo dadka iyada oon ladareen siineyn cuqdad iyo nacayb.
Tags: Maxaa Nagala Gudboon Xaaladda Cusub ee Karoonaha Covid19?
Next post Waa Maxay Fayadhowrka Biyaha?
Previous post Maxaa Sababo In Cunnada Lagu Sumoobo?